4 Sekọnd ma ọ bụ Na Na | Martech Zone
Wednesday, November 8, 2006 Fraịde, Ọktọba 24, 2014 Douglas Karr
Cheta ụbọchị ị ga-ehi ụra na modem gị na-egwu mmiri yana ibudata peeji ka ị wee lee ha n'ụtụtụ echi? Echere m na ụbọchị ndị ahụ dị anya n'azụ anyị. John Chow tinye ederede na nyocha a nke Jupiter wepụtara na-ekwu na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị ga-agbapụta ma ọ bụrụ na ibe gị anaghị eburu na 4 sekọnd ma ọ bụ obere.
Dabere na nzaghachi nke ndị na-azụ ahịa na ntanetị 1,058 ndị nyochara n'oge ọkara mbụ nke 2006, JupiterResearch na-enye nyocha ndị a:
Nsonaazụ nke onye na-ere ahịa na ntanetị nke saịtị ya na-egosighị nke ọma gụnyere ihu ọma na-adịghị mma, nghọta na-ezighi ezi, yana, nke kachasị mkpa, nnukwu ọnwụ na ahịa niile.
Iguzosi ike n'ihe na ịzụ ahịa n'Onlinentanet dabere na ngwa ngwa ngwa ngwa, karịsịa maka ndị na-azụ ahịa ego dị ukwuu na ndị nwere nnukwu ọrụ.
JupiterResearch na-atụ aro ka ndị na-ere ahịa gbalịsie ike idobe nsụgharị peeji nke agaghị agafe sekọnd anọ.
Ihe ndi ozo achoputara na akuko a gosiri na ihe kariri otu uzo n’ime ndi n’azu ahia nwere ezigbo ihe omuma ha gbahapuru saiti a ebe ebe pacenti iri asaa n’abuo agaghi azu ahia na saiti a. Nsonaazụ ndị a gosipụtara na ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị arụ ọrụ nke ọma nwere ike imebi aha ụlọ ọrụ; dị ka nnyocha ahụ si dị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 75 nke ndị ahịa na-enweghị afọ ojuju ga-azụlite echiche na-adịghị mma banyere ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụ gwa ndị enyi ha na ezinụlọ ha banyere ahụmịhe ahụ.
Nke a nwere ike ịbụ nnukwu 'iwu mkpịsị aka' maka ngwa ọ bụla. 4 sekọnd nwere ike ịbụ nnukwu ọnụ ụzọ - ewezuga data mkpokọta data na njikọta data buru ibu, peeji nke abụọ nke 4 nwere ike ịchọ ịbụ oge kachasị ibu gị maka ibe tupu ị kpebie ịkwalite ma ọ bụ belata ọrụ.
Ọ bụrụ n'ị bụrụ onye ahịa, nke a nwekwara ike ịbụ atụmanya ịchọrọ ịtọgbọ na onye na-ere gị. Ekwenyeghi m ma enwere ike itinye iwu ahụ n'ofe kwụ ọtọ, mana enwere m ntụkwasị obi zuru oke na enweghị ndidi bụ enweghị ndidi, ma ọ bụ ụlọ ahịa n'ịntanetị ma ọ bụ ngwa dị n'ịntanetị.
Tags: 4 sekọndanyaobi ụtọ ndị ahịae-azụmahịaecommerceọnwụ na ahịaonye na-ere ahia ịntanetịahaere ahịaiguzosi ike n'ihe shopper